मनमैजु ह’त्याका’ण्ड : युवती विवादमा घट्यो यस्तो दुःखद घटना ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मनमैजु ह’त्याका’ण्ड : युवती विवादमा घट्यो यस्तो दुःखद घटना !
admin August 15, 2020 August 15, 2020 समाचार	0
काठमाडौँ । काठमाडौँको मनमैजुस्थित सुमन गोर्खा खाजा घरमा दोलखाका दोर्जे तामाङसहितका युवा–युवती चिया पिउँदै थिए । केहीबेरमा नुवाकोट घर भएका लक्ष्मण तामाङको समूह त्यहाँ पुग्यो । एकैछिनमा दुई पक्षबीच विवाद भयो । दोर्जे समूहले छु राले हा नेर २४ वर्षीय लक्ष्मणको ह त्या गरे । शुक्रवार साँझ भएको सो हत्या ‘युवती विवाद’का कारण भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
मृ तक र दोर्जे समूहको बिचमा ‘पुरानो प्रेमिका’को बारेमा विवाद भएको हत्याबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए । उनीहरुबिच अघिल्लो दिन पनि सामान्य विवाद भएको थियो । ह त्यामा संलग्न मुख्य आरोपी पक्राउ परेका छैनन् । सोधपुछका लागि तीनजना युवलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।
दुईपक्ष झ डप हुँदा दोर्जेले खाजाघरबाट लखेट्दै मितेरी पुलमा लगेर लक्ष्मणलाई छु रा हा नेको बताइएको छ । ह त्याबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
हेर्नुहोस कोरोना कहरकाबीच जमुनाह नाकाबाट दैनिक ३०० नेपाली भारत जाँदै
फेरि गयो भुकम्प, सर्वसाधारण त्रसित